Wako Marketer Aripo Kuti Akubatsire Iwe | Martech Zone
Svondo, July 26, 2015 Svondo, July 26, 2015 Douglas Karr
Ndine shamwari dzakawanda dzinomhanyisa masangano ekushambadzira uye mazhinji evanoshambadzira nyanzvi mukati meInternet yandiri shamwari navo. Ini handisi kuwedzeredza kana ndikati chinhu chinonyanya kugumbura icho ini nevamwe tinoona nezve basa redu ndicho kushorwa yemabhizimusi atiri kushanda nawo.
Isu tinobhadharwa kuti tibvunze nevatengi uye tibatsire nezano ravo rekushambadzira nekuti ivo vanoziva vari kupihwa mabutts avo avanopihwa nevavanokwikwidza navo. Ivo vanonyatso ziva kuti izvo zvavari kuita hazvisi kushanda. Asizve, kana isu tichiongorora marongero avo, tichitsvaga vavakwikwidzi, uye nekudzoka nehurongwa… vanoramba:
Hatina nguva. - Chaizvoizvo? Kana iwe usina nguva yekuchengeta uye kukura bhizinesi rako, saka fara neinodzikira mari yauinayo. Rombo rakanaka!
Takaita izvozvo kamwe chete uye hazvina kushanda. - Kamwe. Hapana zano renguva refu, hapana maitiro akanakisa, hapana hunyanzvi… hazvina kushanda nekuti waisaziva zvawanga uchiita.
Ndakaverenga chinyorwa online chaiti icho hachishande. - Zvese zvinyorwa zvepamhepo pane zvakaenzana uye zvinopesana chinyorwa online. Ini ndinofunga ndiwo mutemo weNewton wechitatu weInternet. Regedza kutsvaga zvinyorwa zvinoenderana nechinzvimbo chako.
Hatikwanisi izvozvo. - Chaizvoizvo # 2? Iwe haugone kuchengeta uye kukura bhizinesi rako? Sei wakandidana?
Makunakuna angu, akaitira webhusaiti yeChechi yangu, anoti… - Ehe, zvirokwazvo akadaro. Zvakangoitikawo… Handisati ndambonzwa nezveChechi iyoyo.
Bhizinesi redu rakasarudzika, vatengi vedu vakasiyana. - Your vatengi vanogona kunge vari… asi imhaka yekuti kushambadzira kwako kunonhuhwa uye hausi kuwana huwandu hwakawanda hwevatengi uhwo vanokwikwidza vako vari.
Zvese izvi mhinduro zvinopindura ndezvekuti:
Asi, iwe wakatisheedza uye ukakumbira rubatsiro rwedu. Uye iwe wakaongorora mareferensi edu. Uye iwe wakaona iyo indasitiri kurumbidzwa kwatakatambira. Uye - kana tikakundikana, iwe uchatidzinga basa uye nekuudza munhu wese waunoziva kuti rakashata basa ratakaita. Iwe unofunga chaizvo kuti tinoda kuti izvozvo zviitike?
Chinangwa chedu sevanachipangamazano vekutengesa ndechekupa ruzivo rwedu, hunyanzvi hwedu, uye kushuvira kwedu, kubatsira bhizinesi rako kuita zvirinani. Tinogona here kumisa kumashure nekumberi tosvika kubasa? Zvinonetesa.
Ndiri kugara ndichida kuziva kana mumwe wevanhu ava akapinda mutsaona yemotokari, kunyangwe vangave vachiudza muridzi wemoto mabudiro avangaita kuvaburitsa mumota, kuti EMT inofanirwa kunge ichivarapa sei, uyezve kuti Chiremba anofanira kunge achirapa sei ivo.
Inguva yakareba sei, yakawanda sei, sei, sei, sei ... Zvakafanana nekubvunza mutyairi wemotokari yemujaho uye nechikwata chake izvo zvigadziriso uye marongero aachazoshandisa pamberi pehangemutange. Kusava nehanya nemamiriro ekunze, mamwe madhiraivha, kugona kwemota… ingotiudza nezvemaawa mana anotevera uye zvese zvichaitika pamakumbo ega ega.
Kana iwe uine chipangamazano wekushambadzira uyo anokuudza iwe, pamwe urikuzovadzinga nekuda kwezvavaitarisira uye kukunyepera. Kana iwe uine vakatendeseka kushambadzira chipangamazano, ivo vari kuzokuudza iwe kuti zvichatora nguva yekutsvagisa, kuyedza, uye kugadzirisa chirongwa chako kuti usvike pakukwirira kwayo kugona.
Isu takave nemutengi watakashanda uye tikaramba tichiita kwemakore akati wandei. Nguva imwe neimwe, taiwedzera nzira yavo uye ivo vaizofunga kuti vapedza… saiti yakwira, zvinotungamira zviri kumusoro, zvemukati zvakanyorwa, boom. Ivo vangambomira kubatanidzwa kwedu. Isu taivayambira kuti vanofanirwa kuita kuti zano rirambe richienderera, asi ivo vaizomira uye zano racho raizodzikira. Ipapo vaizodzoka kwatiri, vatangazve, kuramba zvese zvatanga tichiita, uye kunyunyuta nezve mhedzisiro. Mhedzisiro yacho yaizogara ichitanga yakaipa nekuti isu taifanirwa kuwedzera moto uye kufarira kwavo brand zvakare.
Mwedzi wapfuura, takafunga kusiyana. Tichine mukana kune avo analytics uye kushanya kwavo kwehupenyu kuri pasi -29.26%.
Kutungamira Kwako Kunoyamwa
Nekure kwandinoda. Mavhiki mashoma mukati uye iyi ndiyo meseji yatinogara tichinzwa nevatengi vanoramba. Vanga vachipokana neese marongero nguva yese, saka zvokwadi inotungamira inoyamwa. Izvi zvinogonesa zvese zvavaitaura nguva yese… izvo zvatakakurudzira hazvishande, vamwe vakadaro, uye vatengi vavo vakasiyana.
Ndingataure kuti kurudziro uye kuitiswa kwekushambadzira nekutengesa zvakatosiyana. Kutengesa kunokurudzirwa kuvhara, kushambadzira kunokurudzirwa kutyaira huwandu hwakawanda hwezvinotungamira zvirinani kune rako bhizinesi. Tichangobva kunyora nezve iyo kushungurudzika kwemabhizimusi anotengeswa nekutengesa nekutengesa kutaura ndakanangana nenyaya iyoyo.
Heino muenzaniso wakananga kubva kubhizinesi rangu. Isu takapedza bhajeti hombe zvisina kujairika pakuenda uye kutsigira chiitiko chegore makore mashoma apfuura. Yaive inopfuura hafu yemari yedu yegore negore. Kambani yedu yaivhara maakaundi madiki pasina dambudziko, asi isu tanga tisingasvike kumaakaundi akaundi ayo ari maanchor evatengi vedu. Ndingadai ndakaramba ndichivhara bhizinesi diki uye ndichiita zvakanaka… kana ini ndaigona kushanda kuti ndigadzire mashoma anotungamira angave aripo pachiitiko ichi.
Isu takapinda chiitiko ichi uye takapedza rinopfuura gore tichirera ma lead maviri atakasangana ipapo. Zvakatora rinopfuura gore, asi isu takavhara ese ari maviri mabhizinesi pazvinhu zviviri zvikuru zvekuita nhoroondo yekambani yedu. Dai isu takangotonga kwedu kushambadzira kuyedza mwedzi kana kupfuura gare gare, isu tingadai takafunga kuti ndiko kutadza kuzere.
Nekukanda mambure akakura nekutengesa kwepamhepo, uchawana zvakawanda zvinotungamira. Uye mazhinji… kunyangwe mazhinji… eaya anotungamira anogona kuyamwa. Asi iwe uri kuenda zvakare kuwana mukana kune dzimwe nyangadzi dzaungadai usina kumbowana mukana wekukwezva. Mahwenga anongoda imwe nguva yekuti iwe ugadzire masimba pamhepo, kuvaka kuvimba nekuita kukuru, kusimudzira izvo zvekuita, uye kuvhara zvimwe zvekutengesa.
Pakupedzisira, yako yepakati yemari pamutobvu ichawedzera, mutengo wako pamutungamiri uchadzikira, uye uchagadzira zvinotungamira zvirinani.
Zvinongotora nguva. Zorora uye ngatibatsire iwe.
Tags: inotungamira kuyamwazvikonzero zvekushambadzirakushambadzira kushambadzira